Waxsoosaarka - Farsamada Shaandhaynta
Waxsoosaarka Casriga ah
Ku tiirsanaanta faa'iidooyinka ilaha warshadaha ee Runner Group iyo waayo-aragnimadeena daaweynta biyaha sanadihii la soo dhaafay, Filter Tech waxay ogaatay isku-darka hore ee tikniyoolajiyadda caqliga sare leh iyo khadka badeecadda sifeynta biyaha ee hadda jira.
Waxaan dhisnay aqoon -isweydaarsiyo caqli -gal ah oo dabacsan si aan u gaarno habaynta modularization. Hawlgalka isku midka ahi wuxuu noo oggolaanayaa inaan bilowno wax ka badan hal hawl oo isku mar ah kaas oo abuuraya nidaam hawlgal oo hufan oo bixiya xalal shaqsiyeed oo badan.
Isticmaalka tirooyin badan oo qalab otomaatig ah sida robot, dareeme, nidaamka gudbiyaha otomaatiga ah si aan ula wareego shaqada gacanta, waxaan ku guuleysanay otomaatiga duritaanka, shaandhaynta shaandhaynta, isu -soo -saarka badeecadda, kormeerida badeecadda si loo hagaajiyo hufnaanta hawlgalka.
Anagoo abuurnay Is -dhexgalka Xog -ogaalnimada iyo madal -warshadeynta, waxaan si tartiib tartiib ah u garwaaqsannaa maareynta macluumaadka iibka, R&D, silsiladda sahayda iyo hawlgalka ururka.
Hawlgal isku mar ah
Waxqabadyo badan ayaa ku dhaca isla duruufaha hawlgalka
Automation -ku wuxuu caawiyaa in mashaariicda la dhammaystiro shaqaale yar iyo in la kordhiyo wax -soo -saarka
Kor u qaadista Xog -ogaalnimada
Si tartiib ah u gaadho hal -abuurka ganacsiga iyo casriyeynta maamulka
Abuuritaanka Caafimaad Cusub, Ammaan leh iyo Nolol Cusub oo Cagaaran
Laga soo bilaabo 2010, waxaan la shaqaynaynay shirkadda la -talinta ee Toyota Group si aan u soo bandhigno Maareynta Caatada ah. Halkii aan si buuxda u qaadan lahayn, waxaan gudaha ka gelinnay ruuxa TPS (Nidaamka Wax -soo -saarka Toyota) baahiyaha dhabta ah ee hawlgalkayaga ganacsi, taas oo horseeday horumarinta fikraddayada gaarka ah ee RPS (Nidaamka Soo -saaraha Runner). Si aan kuu siino badeecad aad loo qiimeeyo, waxaan hirgelinay hagaajinta RPS si aan u xaqiijinno wanaajinta maamulka caatada ah iyo hagaajinta tayada. Intaa waxaa dheer, sannad kasta waxaan u tagnaa waxbarashada Toyota annaga iyo alaab -qeybiyeyaashayada. Nidaamka, oo la casriyeeyay tobankii sano ee la soo dhaafay, wuxuu na siinayaa hubinta kheyraadka tayada leh ee ku jira silsiladda qiimaha, wuxuu noo oggolaanayaa inaan si xoog leh ugu adeegno.
Waxaan la shaqeyneynaa alaab -qeybiyeyaasheena si aan u sii qoto -wadno wada -shaqeynta silsiladda sahayda iyo isku -darka ilaha. Maalgelinta kheyraadka muhiimka ah iyo dib-u-bixinta qaar ka mid ah hababka aan muhiimka ahayn waxay noo suurtogelinaysaa inaan ku siino adeegyo kharash hawlgal oo macquul ah.
Jawiga Shaqada Cagaaran
Waxaan ku dadaaleynaa inaan u abuurno shaqaalaheena jawi shaqo oo saaxiibtinimo leh, waxaan u dhisnaa aqoon isweydaarsiga daahirinta siigada, si aan u dhisno hab wax soo saar nadiif ah, caafimaad leh oo hufan. Farsamo ahaan, waxaan ku darnaa "cagaar", "caafimaad", "sirdoon macmal ah" iyo fikradda nolosha kale ee alaabtayada si aan kuugu oggolaano inaad ku raaxaysato waayo -aragnimada dadka iyo nolosha wanaagsan.
Isdhexgalka Silsiladda Sahayda Qiimaha Leh
Wadashaqaynta alaab -qeybiyeyaashayada, Filter Tech waxay sii qoto dheeraysaa xiriirka silsiladda warshadaha, waxay dhexgelisaa ilaha gudaha iyo dibaddaba, waxay dhistaa madal iskaashi silsiladda sahayda ah, waxay dejisaa qiimaha caatada ah ee saadka silsiladda sahayda, kaas oo Filter Tech uu si dhakhso leh uga jawaabi karo baahiyahaaga, samee hagaajinta qiimaha iyo bixinta xalal ka wanaagsan adiga.
Nidaamka Dib -u -noqoshada ugu Wanaagsan, Beddelka Shaandhada Biyaha Kaydadka Biyaha, Biyo -nadiifiye Biyaha Adag, Taabo Nidaamka Shaandhaynta Biyaha, Guryaha Biyaha Sifeeya, Kaydadka shaandhaynta,